Ilay saka Khao Manee irery | Noti saka
Ilay saka kanto Khao Manee
Ny saka Khao Manee dia iray amin'ireo miavaka indrindra manerantany. Izy dia manana endrika tena mamy sy mamirapiratra miaraka amin'izay. Raha ny tena izy dia Diamond Eyes, Royal Siam Cat ary White Jewel no ahafantarana azy satria mamirapiratra ny masony.
Te hahafantatra bebe kokoa momba an'io karazany tsara tarehy io ve ianao? Avy eo, aza adino ity manokana ity izay holazainay aminao ny tantarany, ny mampiavaka azy, ny fikarakarany ary maro hafa.
1 Tantaran'ny Khao Manee
4 Ahoana no hikarakaranao ny tenanao?
5 Ahoana no hampiofanana saka Khao Manee?
Tantaran'ny Khao Manee
Ilay mpihetsiketsika volo anay dia avy any Thailandy, izay nanoloran'ny mpanjaka taloha V Rama ny tenany tamin'ny fitaizana azy ireo. Biby iray manintona ny sain'ny maro izy io, ka vetivety dia lasa karazany malaza indrindra izy tamin'ny fotoana nanjakany (1868-1910). Tamin'izany fotoana izany dia nantsoina hoe Khao Plort izy izay midika hoe "fotsy tanteraka". Ary ny fotsy dia iray amin'ireo loko tsara tarehy indrindra ananan'ny biby. Hatramin'ny toerana niavian'izy ireo dia inoana fa ireo volom-borona ireo dia manintona vintana sy fahasambarana.
Na izany aza, ity karazana ity dia tsy nandao an'i Thailand hatramin'ny 1999, rehefa nandray ny voalohany ny Amerikanina Colleen Freymouth ary nitondra izany tany Etazonia. Izy io, noho izany, tsy dia fantatra loatra ary sarotra ny mahita amidy, ary rehefa azo dia avo ny vidiny araka ny ho hitantsika any aoriana.
Ny Khao Manee dia saka albino siamese izay milanja eo anelanelan'ny 3 sy 6kg, izay ny vatany dia miaro ny volo fotsy fohy fohy.. Ny maso, ilay ampahany misongadina indrindra ao aminy, dia samy hafa loko: ny iray ho manga ary ny iray amber na mavo. Boribory lavalava ireo. Ny tongony dia malalaka sy matanjaka, ary ny rambony dia malalaka eo am-potony sy lava.
Noho ny antony fototarazo, ireny felines ireny matetika teraka marenina na marenina ampahany. Saingy tsy maintsy lazaina fa mihena ny marenina amin'ireo santionany farany teo.
Biby mahafinaritra ity volo kely ity. Ankafizo ny miaraka amin'ny ankohonanao, mahazo fanalefahana avy amin'izy ireo, ary maninona? Oroka. Tiany be ny miaraka amin'ny olona, ​​ary mifanerasera tsara amin'ny rehetra: ankizy sy olon-dehibe. Manana toetra mivoaka sy velona izy, izay mahatonga azy ho sakaiza tena tsara.
Ilay Khao Manee tena mampiantrano azy io, izay midika fa tsy manana izany filàna mandresy lahatra izany, ohatra, ny saka Bengal. Na izany aza, raha ampianarina mandeha miaraka am-pita, Azoko antoka fa hanana fotoana mahafinaritra ianao.
Ahoana no hikarakaranao ny tenanao?
Ho an'ny tanjona tokana hitazonana fahasalamana tsara, volo mamirapiratra ary nify salama, torohevitra ny hanome azy sakafo (maina na lena) izay tsy misy serealy. Ny safidy hafa dia ny sakafo Yum na Barf, fa ity farany kosa dia tokony hatao amin'ny alàlan'ny toro-hevitra momba ny biby.
Saka izany mila miborosy isan'andro ianao, indray mandeha na indroa, miaraka amina karatra ohatra. Ankoatr'izay, indraindray ianao dia afaka misafidy ny mitafy fonon-tànana, hanararaotra ary hanome otra azy rehefa esorinao ny volo rehetra mety maty.
Amin'ny ankapobeny dia saka tena mahasalama izy io, saingy amin'ny fiheverana fa karazany azo teraka marenina izy io zava-dehibe ny itondranao azy any amin'ny mpitsabo biby mba hanaovana fitiliana ary milaza aminao ny fomba fihetsika raha izany.
Ahoana no hampiofanana saka Khao Manee?
Ny Khao Manee dia saka milamina, manana toetra mahay mandanjalanja, noho izany, tsy ho sarotra aminao ny manabe azy. Ho an'izay, tsy maintsy manam-paharetana ianao, ary ambonin'izany rehetra izany dia aza manary fanajana mihitsy. Mandritra ny fahatanorany dia mety ho somary tsy voafehy izy, ka tsy maintsy hamerina zavatra imbetsaka ianao.
Ohatra, ny mampianatra azy tsy hanaikitra, fika tsotra nefa mahomby (na dia mila fotoana hahalalana azy aza) dia izao manaraka izao:
Raha hitanao fa hanaikitra anao izy, dia atoroy azy avy hatrany ny tady, biby voadona, izay azony rehetra manaikitra.
Ary milalao miaraka aminy mandritra ny fotoana fohy.
Raha efa nanaikitra anao izy ireo dia tazomy ny tananao na ny tongotrao. Ka havoakany izany. Avy eo esory eo amin'ny sezalava izy ary tsy raharahiana mandra-pitony.
Tsy ho ela izy dia hifandray amin'ny manaikitra amin'ny 'tsy manao na inona na inona', zavatra izay hahasosotra azy ary hiezaka ny hisoroka an'izany izy amin'ny tsy handratra anao.
Eny, Zava-dehibe tokoa ny tsy tokony hanaovanao fihetsehana tampoka rehefa mifanerasera aminy ianao. Mahaiza misoko mangina. Aza terena hanao zavatra tsy tiany izy satria raha tsy izany dia tsy ho saka sambatra izy fa ny mifanohitra amin'izay no izy.
Ny Khao Manee dia karazany lafo, iray amin'ireo lehibe indrindra. Noho izany, tsy tokony hahagaga anao ny fangatahan'ny mpangataka matihanina sasany aminao 6000 euros ho an'ny alika kely.
Raha te-hijery sary bebe kokoa an'ity biby tsara tarehy ity ianao dia ankafizo ireo sary navelanay anao eto ambany:
Sary - Purrfectcatbreeds.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Ilay saka kanto Khao Manee
Adrian mancera dia hoy izy:
nasongadina tsara fa toa ahy ny saka Khao Manee sasany manana loko maso somary maintso kokoa, fa raha tsy izany dia tena tsara.
Nieritreritra aho fa voamarika tsara ny fikarakarany ary tsara ihany koa ireo sary
Fa te hahafantatra ny fomba hahalalana raha tena madio izy io, amin'ny teny hafa hoe tena razamben'ny razambe io, nieritreritra ihany koa aho fa ilaina ny mametraka tolo-kevitra vitsivitsy hahafahana mividy ny saka.
Valiny tamin'i Adrian Mancera
Karatra hamahanana saka mania?
Ilay saka singapura